Talooyiin kaa caawinaya in si degdeg ah aad wax u xifdiso
Home Maskax-fur Talooyin kaa caawinaya in si degdeg ah aad wax u xifdiso
Talooyin kaa caawinaya in si degdeg ah aad wax u xifdiso
Noqo qof diyaar ah in uu maskaxdiisa furo
Maskaxda aadanaha waa u muhiim xifdiska iyo xusuusta - UNSPLASH
Haddii dad badan xitaa aad weydiiso sida casharada iyo waxyaabaha kale loo xifdiyo, waxay kuu sheegayaan in muhiimadda ay tahay ku celcelin.
Balse, dadka leh xirfadaha dheeraadka ah, sida laacibiinta ciyaaraha fudud, waxay kuu sheegayaan waddo midaa ka duwan.
Waxa keli ah eek u caawin karo waa in aad diyaar u tahay xifdinta, in aad dareen gaar ah u leedahay iyo in aad barato, aadna sii barto qof kale.
Sidoo kale waa in aad naftaada u tababartaa sidii ay ula qabsan lahayd wax soo xusuusashada – iyadoo ka dhex baareysa xogta aadka u badan eek u keydsan.
Raac tallaabooyiinkan wax ku oolka ah:
Noqo qof diyaar ah
Si aad waxyaabaha kala duwan ee muhiimka kuu ah u xifdiso ama korka uga barato, Haddaba si dhow ula soco goobta aad ku sugan tahay iyo waxa aad baraneyso.
Dadka intooda badan waxay jecel yihiin meel deggan oo qofka uusan carqaladeyneyn. Sidoo kale waxaa jiro kuwa wax ku dhex xifdin kara meel buuq ah oo dad badan ay ku sugan yihiin.
Marka adiga is ogow qofka aad tahay iyo sida kuu fudud ee cashirada iyo waxyaabaha kale aad ku xifdin karto.
Shaaha sidoo kale wuu ku caawinayaa. Sida cilmi baaris lagu ogaaday, Caleenta Shaaha ee Cagaaran (Green tea) waaxay si dabiici ah ugu wanaagsan tahay xifdiska. Waxaa ku jiro maadooyiin caawiya maskaxda.
Sida caadiga ah, unugyo ku jiro maskaxda bini-aadamka ayaa caawiya xusuusashada. Haddaba waa in aad ku celceliso marka hore si ay maskaxda u galaan waxa aad xifdineyso.
Marka qofka uu weynaado, kiimikooyiin sun ah ayaa maskaxda ku faafa oo sababa ilawsho iyo xusuus la’aan. Green Tea wuxuu leeyahay maadooyiin arrimahaas ka hor taga.
Duub waxa aad xifdineyso
Arrintan waxay u wanaagsan tahay marka aad cashirka iskuulka ama jaamacadda xifdineyso. Isticmaal qalabka wax lagu duubo, ka dibna ku duub waxyaabaha laga hadlayo ee kaaga baadan barashada.
Codka aad duubto waxaad ka dhageysan kartaa dib adigoo qeybba mar xifdinaya.
Sidoo kale haddii aad baraneyso luqad qalaad, waxaad isticmaashaa kaarar yaryar oo aad ku qorato ereyada kugu cusub. Waxay kuu fududeyneysaa xifdiska.
Wax kasta qor
Ka hor inta aadan billaabin xifdinta iyo xusuusashada, waa in aad wax ka dib meel ku qortaa oo haddana markale dib u qortaa. Si gaar ah macluumaadka muhiimka ah.
Taa waxay kaa caawineysaa in aad si dhow ula socoto waxa aad xifdineyso. Dabcan kor waa lagu sheegay in ku celcelinta aysan wanaagsanayn, balse tan waxay u wanaagsan tahay dadka u baahan in sitoos ah ay indhaha ugu celceliyaan waxa ay baranayaan.
Kala qodobbee qoraalladaada
Haddii qoraallada oo dhan aa dhal meel isugu geyso, waxaad u baahaneysaa in aad kala saarto. Taa waxay kaa caawineysaa in inta muhiimka ah ana wixii is lehba aad meel isugu geyso – si fudud ayaadna u xifdin kartaa.
Sidoo kale waxay kaa caawineysaa in qeyb kasta aad si gaar ah u xifdiso, macluumaadkana ay ku qormaan maskaxdaada.
Isticmaal farsamada qasriga maskaxda
Habka ugu wanaagsan ee xifdiska waa in qasri u gaar ah aad maskaxdaada ka dhex sameyso adigoo adeegsanaya farsamooyiin casri ah.
Waxaa jiro qaabab kala duwan oo loogu tababarto arrintan, balse midda ugu wanaagsan waa in maskaxdaadad aad ka fakarto kana soo hesho meel ku haboon xifdiska iyo xilliyo u wanaagsan in macluumad cusub ay keydiso,
Marka hore ku tijaabi xog kooban oo aad dooneyso in aadan illaawin. Markan waxaad u baahaneysaa in aad ku celceliso si maskaxdaada ay ula qabsato.
Is ku dey in aad qof kale barto waxa aad xifdineyso
Sida lagu ogaaday baaritaanno dhanka maskaxda ah, in qof kale aad wax barto waxay kaa caawineysaa in waxaas aad korka ka xifdiso, si toos ahna ay u galaan maskaxda qeybta xusuusta.
Qaabka ah in aad qof kale waxbarto waxay noqon karaan sida in aan cashir ahaan u siiso qof ku hor fadhiya ama adigaba inta aad hor istaagto muraayad in aad isu sharaxdo cashirkaas.
Haddii aad quraanka kor ka xifdisay, waad fahmi kartaan arrintan. Maerkaad cashirkaaga soo barato ka dib waxaad uga baxdaa macallimka – waxay la mid tahay adigoo isaga baraya.
Waxay arrintanna tahay in aad khibrad u yeelaneyso waxa aad xfdineyso, taas oo aad ka heleyso faa’iido ka badan middii aad u socotay.
Waqti kooban naso
Ugu dambeyn, waa in aad nasasho la timaadaa. Ma ahan in aad shaqo kale qabaneyso ama telefoonkaaga ku ciyaareyso. Waa in ugu yaraan daqiiqado kooban aadn maskaxda nasisaa.
Waa in waqtigaas kooban aadan ka fakarin xitaa wixii aad hadda soo baratay. Waxa ugu wanaagsan waa in aad bannaanka u baxdo oo hawo nadiif ah soo qaadato – socodka yarna aad ayuu u wanaagsan yahay.
Marka aad soo noqoto, waxay kula noqoneysaa in waxa aadba taqaano oo aadan u baahneyn xifdin dheeraad ah. Taas na waxay fududeysaa dareenka joogo iyo in aad diiradda saarto wixii aad baratay.
Hadda isku dey tallaabooyiinkan, ka dib waad heli doontaa faa’iidada. Muhiimaddu waa in aad wax kasta si wanaagsan u xusuusato.
Previous articleGuurka ay waalidka qorsheeyaan malaga ilbaxay? Qiso ku dhacday gabar
Next articleArrimo aad ku ogaan kartid inaad weli jeceshahay qof xiriir hore kaala dhexeeyay